Milalao tsy araka ny fanjakazakan-dehilahy: maka ny ‘toerana natokana ho an’ny lehilahy’ ny tovovavy Miozolomana tamin’ny filalaovam-baolina · Global Voices teny Malagasy
Any Kolkata, milalao baolina hihaikana amin'ny fanjakazakan-dehilahy ny tovovavy Miozolomana
Voadika ny 09 Jolay 2019 8:09 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, Español, 繁體中文, Ελληνικά, Português, українська, नेपाली, Italiano, English
Pikantsarin'ny lahatsary “Milalao tsy araka ny fanjakazakan-dehilahy: naka ny ‘toerana natokana ho an'ny lehilahy’ ny tovovavy Miozolomana tamin'ny filalaovam-baolina”.
Nosoratan'i Grace Jolliffe ny lahatsoratra ary nivoaka voalohany tao amin'ny Video Volunteers, vondrom-piarahamonina mpampita vaovao iraisampirenena miorina ao India nahazo loka. Navoaka eto ambany ny endrika nasiam-panovana ho anisan'ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Nanonofy ny ho lasa mpilalao baolina indray andro any ny vondrona tanora zazavavy Miozolomana. Tonga nanao fanazarantena tao amin'ny kianja filalaovana ho an'ny daholobe ao amin'ny faritanàna mahantra any Rajabazar ao Kolkata, renivohitry ny fanjakana Indiana any Bengal Andrefana izy ireo. Manofinofy hitaritarika baolina izy ireo ary milalao amin'ny toerana lehibe kokoa manoloana ny vahoaka betsaka kokoa. Nanontany ny sasany tamin'ireo ankizivavy ireo ilay mpitati-baovao avy ao amin'ny vondrom-piarahamonina Video Volunteers antsoina hoe Debgopal Mondal ary nanatontosa lahatsary fanadihadiana iray izay mampiseho ny fomba fihaikàn'ireo tovovavy ny miralenta amin'ny alàlan'ny fanatanjahantena.
Shahina Javed no vehivavy nanangana ity ekipa mpilalao baolina kitra izay vehivavy avokoa ity. Nandrava ny fenitra ara-tsosialy nandritra ny folo taona lasa i Shahina amin'ny maha-mpanorina ny FTMF Roshni azy izay miady amin'ny herisetra ao an-tokantrano, ny fampanarahana harena ny mpanorin-tokantrano ary ny fampanambadiana ankizy. Ankoatra ny fandrisihana ireo tovovavy adolantsento, nitarika atrikasa fanentanana momba ny zon'ny vehivavy hahazo fanabeazana ihany koa i Roshni .
Vakio koa ity: Years After Marriage, Indian Women Dare to Say Their Husbands’ Names for the First Time
Na dia niharan'ny fanavakavahana efa hatry ny ela teo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena aza ny vehivavy Indiana , ireo tovovavy Miozolomana ireo kosa dia manohitra ny fiheverana fa “sehatra natokana ho an'ny lehilahy” ihany izany. Araka ny hevitry ny ankizivavy iray, Mehvi Shira, nampianatra azy ny fandraisaa anjara tamin'ny ekipan'ny zazavavy fa mahay toy ny ankizilahy ny ankizivavy:
Nihevitra isika hatramin'izay fa hoe tsy afaka milalao baolina kitra ny zazavavy fa ny ankizilahy ihany saingy taty aoriana dia fantatra fa samy afaka milalao izy ireo. Mitovy izy ireo. Raha afaka mandalina bebe kokoa ny zazalahy dia afaka mandalina bebe kokoa ihany koa ny tovovavy. Afaka mandray anjara ihany koa ny tovovavy toy ny ankizilahy.
Any India, tsy mora ho an'ny zazavavy ny miroso amin'ny fanatanjahantena. Ny fanavakavahana eo amin'ny lahy sy ny vavy dia tsikaritra eo amin'ny elanelan-karama raisin'ny lehilahy sy ny vehivavy, ny fihetsika miangatra manoloana ny atleta vehivavy, ary tsy lazaina intsony ny fanamarihana ara-pananahana matetika sy ny trangana fanorisorenana. Manasongadina ny olana izay lalim-paka amin'ny rafitra ara-panatanjahantena sy amin'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny io tsy fitoviana io. Antony fanampiny mahatonga ireo tovovavy tsy hanatanteraka ny nofinofiny ihany koa ny tsy fahampian'ny fotodrafitrasa, ny hirika, ary ny fanohanana avy amin'ny governemanta. Hoy i Tani Fatima hoe:
Tsy an'ny [zazalahy] ny kianja. Fa antsika rehetra. Manan-jo hiditra any izahay ary hilalao. Manakana anay tsy hilalao ry zareo. Tsy manana toerana manokana hilalaovana izahay izay misy fiantraikany eo amin'ny lalao ataonay.
Vakio koa ity: How Are Boys and Girls Supposed to Sit, Walk, and Dance? An Experiment in India's Gujarat.
Raha maro ny olona ao India no mihevitra fa hevitra nofinofy ihany ny fitovian'ny lahy sy ny vavy eo amin'ny fanatanjahantena dia nisy ny hetsika mihamitombo nataon'ny vahoaka izay niroso tamin'ny firesahana izany sy namaha ny olana sasany sedrain'ny vehivavy. Manohana ny fitoviana ny mpikatroka an-dahatsary ao amin'ny tambajotran'ny VideoVolunteer (na ny lehilahy na ny vehivavy) ary miady amin'ny famongorana ny fenitra fanjakazakan-dehilahy eo ambanin'ny fanentanana Khel Badal ao amin'ny VideoVolunteers. Ity no ohatra iray amin'ny fanehoan'ny VideoVolunteers ny tantara momba ny fomban'ny vehivavy amin'ny fiatrehana, fifampiraharahana ary ny fanamby amin'ny fanjakazakan-dehilahy.
Jereo ny lahatsary :